तपाईलाई थाहा छ ? महिला र पुरुषको सर्टमा टाँक ठिक विपरीत किन हुन्छ ? – राजधानी खबर
प्रत्येक पलको खबर हाम्रो प्रयास..
न्यु टुलिप्स स्कुलको सहभागितामा मनोहरा नदी सफाई (भिडियो )
सिटिइभिटिको नेविसंघ सह-सचिवमा शेर्पा
नेपाल चलचित्र श्रमिक संघको छैटौं काठमाडौं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न
श्याव्रु नृत्यसँगै साइप्रसमा लोसार सााकृतिक कार्यक्रम सम्पन्न
फागुन २६ को लोसार साँझ २०७४ को तयारी ७५ प्रतिशत पुरा
तपाईलाई थाहा छ ? महिला र पुरुषको सर्टमा टाँक ठिक विपरीत किन हुन्छ ?
तपाईले कहिल्यै यो कुरामा ध्यान दिनु भएको छ कि महिला र पुरुषको सर्टमा टाँक अर्थात बटन अलगअलग साइडमा किन हुन्छ ? सामान्यतः महिलाको सर्टको टाँक बायाँतर्फ हुन्छ, जबकि पुरुषको सर्टमा दायाँतर्फ । तर, यसो किन ?
हाम्रो सर्टमा रहेको टाँकको कयौ सिद्धान्त छ, पछिल्ला कयौ सताब्दीको परम्पराअनुसार यसमा अनेक तर्क दिइएको छ। एउटा भनाइ अनुसार पहिला पुरुषहरु आफ्नो कपडा स्वयम आफै लगाउथे भने महिलाहरुलाई अरुले कपडा लगाइदिने गर्दछ । र, अधिकांश मानिस दाहिने हातले काम गर्दथे ।
यही कारणबाट पुरुषको सर्टमा दायाँतर्फ टाँक लागेको हुन्छ जबकि महिलाहरुको कपडामा बायाँतर्फ टाँक हुन्थ्यो । किनभने उनीहरुलाई अरु महिलाले कपडा लगाइदिन्थे ।यस्तै अर्को भनाइ पनि छ । यो भनाइअनुसार पहिला पुरुष दायाँ हातमा तरबार राख्दथे, जबकि महिलाहरु आफ्नो बायाँ हातले बच्चा समाउँथे ।
पुरुषलाई टाँक बन्द गर्न र खोल्नका लागि बायाँ हातको सहयोग लिनु पर्दथ्यो । त्यसैले पुरुषको सर्टमा दायाँतर्फ टाँक हुन्थ्यो । तर, महिलाहरुका साथ ठिक विपरीत हुन्थ्यो त्यसैले महिलाहरुको कपडामा बायाँतर्फ टाँक हुन्छ । पहिलापहिला महिला र पुरुषको पहिरनमा अनेकन भिन्नताहरु हुने गर्दथ्यो । तर समय बित्दै जाँदा महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिएपछि उनीहरुको कपडा पनि करिबकरिब एकैजस्तो हुन लाग्यो । त्यसैले महिला र पुरुषको कपडामा केही अन्तर देखाउन पनि यस्तो गरिएको हो ।
यस्तो यसको सम्बन्ध नेपोलियन बोनापार्टसँग पनि छ । भनिन्छ कि नेपोलियनले महिलाहरुको कपडामा बायाँ टाँक लगाउन आदेश दिएका थिए ।किनभने नेपोलियन सधैजसो एउटा हात सर्टमा हालेर उभिन्थे । र, महिलाहरुलाई यसबाट अलग गर्नका लागि उनले यस्तो गरेका हुन् । किनभने महिलाहरु उनलाई जिस्काउन उनको नक्कल गर्न थालेका थिए । साथै कपाडा उत्पादनकर्ताहरुको कयौ रणनीतिहरुका कारण पनि आजकल महिला र पुरुषको कपडामा टाँक अलगअलगतर्फ लगाएको थियो । एजेन्सी
तनावमा रहने पुरुषको सन्तानलाई मधुमेहको खतरा बढी
शेर्पा समुदायबाट स्थापित साम्दे शेर्पा स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार टुडिखेलमा वितरण गरिने
यस्तो नितम्बलाई भनिदोरहेछ परफेक्ट
December 4, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on यस्तो नितम्बलाई भनिदोरहेछ परफेक्ट
लभ गर्नेलाई होटलको व्यवस्था
December 4, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on लभ गर्नेलाई होटलको व्यवस्था
३९ जना राष्ट्रपति देखेको एउटा दुई सय वर्ष पूरानो रुख यसकारण मासिँदैछ
December 30, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on ३९ जना राष्ट्रपति देखेको एउटा दुई सय वर्ष पूरानो रुख यसकारण मासिँदैछ
February 20, 2018 दिनेश कुमार बस्नेत 2
October 19, 2019 दिनेश कुमार बस्नेत 0
December 3, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on State Assembly candidate’s vehicle caught in ambush, driver hurt
December 3, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on 252 news materials found in violation of election code of conduct
December 3, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on First Women Journalists Everest Expedition – 2018 in rigorous training
यो छुटाउनु भो कि
मोसो दलेर दम्पतीलाई गाउँ निकाला: यसरी भयो घटना
जग्गा खरिदका लागि सरकारले दिने पैसाका विषयमा भूकम्प प्रभावित बेखबर
अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ- सुमार्गीको २२ अर्ब अवैध !
यो खेती गर्दा श्रीमतीसँग किन सुत्दैनन् पुरुष ?